Play Store မှာ မြန်မာပြည်ကို ဒေါင်းလုတ်ခွင့်မပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်များကို ဒေါင်းလုတ်လို့ရအောင် လုပ်နည်း။ – ရှအေလငျး
မင်္ဂလာပါ။ Play Store မှာ ရှိတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တစ်ချို့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါင်းလုတ်လို့မရတာ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ (Clan of Clans)ဆော့ဝဲလ်တွေလိုမျိုးပေါ့။
အဒီလို ဆော့ဝဲလ်တွေကို This item is available your country. ဆိုပြီး ဒေါင်းလုတ်လို့ မရပါဘူး။
အဒီလို ဆော့ဝဲလ်တွေကို ဘယ်လို ဒေါင်းလုတ်ရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ နည်းလမ်းတွေနှင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသုံးပြုရမယ့် ဆော့ဝဲလ်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းလုတ်ပါ။
အဆင့် (1)- Turbo Vpn ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။
အဆင့် (2)- TAP TO CONNECT အောက်က မုန်လာဥပုံကို နိုပ်ပေးပါ။
အဆင့် (3)- ချိတ်ဆက်နေတဲ့အတွက် ခဏစောင့်ပေးပါ။
အဆင့် (4)- CONNECTED ပေါ်ရင် အသုံးပြုလို့ရပါပြီး။
အဆင့် (5)- တကယ်လို့ CONNECTED မဖြစ်ရင် အပေါ်မှာ နိုင်ငံပြောင်းပြီး ပြန်ချိတ်ကြည့်ပါ။
အဆင့် (6)- ပြီးရင် သင့်ရဲ့ Play Store ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် MOVIE နှင့် BOOKS တွေ အသစ်ပါဝင်တာ တွေရပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် (7)- ဒါဆိုရင် COC ဆော့ဝဲလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါင်းလုတ်ခွင့် ပိတ်ပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းနှင့် လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းလုတ် Install လုပ်ခွင့်ရပါပြီး။
မှတ်ချက်။ ။ တကယ်လို့ သင့်ဖုန်းရဲ့ Play Store မှာ မရရင်သေးရင် အောက်ကနည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါ။
အဆင့် (1)- ဖုန်း Setting ရဲ့ Application မှာရှိတဲ့ Googke Play Store ထဲကို ၀င်ပါ။
အဆင့် (2)- Google Play Store ကို Clear Cache နှင့် Clear data ကို နိုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Play Store ထဲကို ပြန်ဝင်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါင်းလုတ် (Install) လုပ်ခွင့် မပေးတဲ့ ဂိမ်းနှင့် တခြား ဆော့ဝဲလ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဒေါင်းလုတ် နိုင်ပါတယ်။
အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေလည်းသိအောင် Share လုပ်ပြီး ကူညီပေးကြပါနော်..
မင်ျဂလာပါ။ Play Store မှာ ရှိတဲ့ ဆော့ဝဲလျတဈခြို့ဟာ မွနျမာပွညျမှာ ဒေါငျးလုတျလို့မရတာ ရှိပါတယျ။
ဥပမာ။ ။ (Clan of Clans)ဆော့ဝဲလျတှလေိုမြိုးပေါ့။
အဒီလို ဆော့ဝဲလျတှကေို This item is available your country. ဆိုပွီး ဒေါငျးလုတျလို့ မရပါဘူး။
အဒီလို ဆော့ဝဲလျတှကေို ဘယျလို ဒေါငျးလုတျရမလဲဆိုတာ အောကျမှာ နညျးလမျးတှနှေငျ့ တငျပေးလိုကျပါတယျ။
အသုံးပွုရမယျ့ ဆော့ဝဲလျကို ဒီမှာ ဒေါငျးလုတျပါ။
အဆငျ့ (1)- Turbo Vpn ထဲကို ၀ငျလိုကျပါ။
အဆငျ့ (2)- TAP TO CONNECT အောကျက မုနျလာဥပုံကို နိုပျပေးပါ။
အဆငျ့ (3)- ခြိတျဆကျနတေဲ့အတှကျ ခဏစောငျ့ပေးပါ။
အဆငျ့ (4)- CONNECTED ပျေါရငျ အသုံးပွုလို့ရပါပွီး။
အဆငျ့ (5)- တကယျလို့ CONNECTED မဖွဈရငျ အပျေါမှာ နိုငျငံပွောငျးပွီး ပွနျခြိတျကွညျ့ပါ။
အဆငျ့ (6)- ပွီးရငျ သငျ့ရဲ့ Play Store ထဲကို ၀ငျလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျ MOVIE နှငျ့ BOOKS တှေ အသဈပါဝငျတာ တှရေပါလိမျ့မယျ။
အဆငျ့ (7)- ဒါဆိုရငျ COC ဆော့ဝဲလျကို မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒေါငျးလုတျခှငျ့ ပိတျပမေယျ့ ဒီနညျးလမျးနှငျ့ လှယျကူစှာ ဒေါငျးလုတျ Install လုပျခှငျ့ရပါပွီး။
မှတျခကျြ။ ။ တကယျလို့ သငျ့ဖုနျးရဲ့ Play Store မှာ မရရငျသေးရငျ အောကျကနညျးလမျးအတိုငျး လုပျကွညျ့ပါ။
အဆငျ့ (1)- ဖုနျး Setting ရဲ့ Application မှာရှိတဲ့ Googke Play Store ထဲကို ၀ငျပါ။
အဆငျ့ (2)- Google Play Store ကို Clear Cache နှငျ့ Clear data ကို နိုပျပေးပါ။ ပွီးရငျ Play Store ထဲကို ပွနျဝငျလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒေါငျးလုတျ (Install) လုပျခှငျ့ မပေးတဲ့ ဂိမျးနှငျ့ တခွား ဆော့ဝဲလျတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးကို အသုံးပွုပွီး ဒေါငျးလုတျ နိုငျပါတယျ။
အပနျးမကွီးဘူးဆိုရငျ သူငယျခငျြးတှလေညျးသိအောငျ Share လုပျပွီး ကူညီပေးကွပါနျော..
ဂမ္ဘီရဆန်သော “မိန်းမအိပ်တောင်”.ကလေး ၁၃ ယောက် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့...